Ogaden News Agency (ONA) – 36 qof oo Magalada Godey lagu xidhay iyo Xaalada Addis Ababa oo kacsan.
36 qof oo Magalada Godey lagu xidhay iyo Xaalada Addis Ababa oo kacsan.
*Macalimiinta Addis Ababa oo Shaqo Joojin Sameyay.
*Godey oo dad badan lagu xidhay dhowaan.
Dad dhawaanaha ku xidhxidhnaa magaalada goday una badnaa dhalinyaro oo ay tiradoodu gaadhaysay 36 qof ayaa maxkamad ku sheegta gumaysigu ku riday xukuno kala duwan.
Dadkan oo sida dhabta ah aan galin wax danbi ah ayaa waxaa lagu kala xukumay inta u dhaxaysa halsano ilaa iyo saddex sanadood .
Xukunkan ku dhisan cadaalad xumada maaha kii ugu horeeyay ee lagu dulmiyo dad aan waxba galabsan ,waxayna caado ka dhigteen maxkamadaha dulmiga u adeega inay shacbigan ku ciqaabaan waxyaalo loo soo dhiibay oo aan sal iyo raad midna lahayn.
Magaalada Addis Ababa ayaa maanta macalimiinti Shaqo joojin sameyeen iyada oo halkaas Ciidamada Woyanuhu ay isku dayeen in ay qasab kusoo xareeyaan.
Shaqa joojinta ay Macalimiintu sameyeen ayaa waxay daba socota mudaharado looga cabanayo gumeysiga Woyanaha oo mushaharka macalimiinta u adeegsada howlihiisa siyaasada. Waxaa Woyanuhu uu kusoo rogay macalimiinta in aan musharaka loo kordhinin oo lasiinin lacag ku filan nolol maalmeedkooda. Waqtigan oo maciishada cirka isku shareertay qiimaha lacagtuna hoos u dhacday.
Waxa kale oo Woyanuhu uu kusoo rogay sharciyo lagu cadaadinayo macalimiinta iyada oo dhowrki biloodba shahado lasiin doono macalimiinta lagu kala saarayo macalimka shaqeyn doona iyo ka la caydhin doona. Shahadadan ayaa 3 sannoba loo cusbaynaysiinaya Macalimiinta. arrintan ayaa waxa laraba in la shaqaleyo dadka taagersan fikrada Woyanaha, Macalimiinta kasoo horjeeda Woyanahana waxaa la rabaa inlaga sufeeyo dugsiyada lagana fogeeyo ardeyda.
Hadaba Xaalada magaalada Addis Ababa ayaa aad usoo cakiran iyada oo dhowaan ay ka dhaceen banaanbaxyo waaweyn oo Muslimiintu kaga soo horjeedaan Taliska TPLF oo Diinta kabadalaya Islaamka magalada Addis Ababa iyo Geeska Afrikaba iyaga oo keenay madhabo aan laga aqoon gayigaas.